Iplanethi yeNeptune :: Iiplanethi zale mihla -
Ukuthelekiswa kweNeptune noMhlaba
INeptune yiplanethi yesibhozo ekufutshane nelanga kwaye (okoko ukususwa kwePluto) yiPlanethi yokugqibela kwiNkqubo yeSola. Kuyafana ngobukhulu kunye nokwakhiwa kwe-Uranus enobubanzi obuyi-49,000km kunye nobunzima obungaphezulu kwamaxesha ali-17 awomhlaba.
Owona nyaka mde
I-Uranus ijikeleza iLanga kanye kwiminyaka eyi-165 malunga ne-4500 yezigidi zeekhilomitha. La ngamaxesha angama-30 umgama osuka eLangeni uye eMhlabeni oko kuthetha ukuba ukomelela kwelanga eNeptune yi-1% yamandla alo eMhlabeni. I-Neptune ijikeleza kwi-axis ene-degrees ezingama-28, ezifanayo ngokufanayo noMhlaba, rhoqo kwiiyure ezili-16.
Kuyabanda kwaye kunomoya
Ngokungafaniyo ne-Uranus 'ephantse yagcwala ilifu, iinkqubo zemozulu yeNeptune zichazwa ngakumbi ngenkqubo yesiphepho emnyama ebonwa kumazantsi nakumantla e-hemispheres nakwezinye izinto ezibonakala zibambene. Isantya somoya ukuya kuthi ga kwi-600m / s siye saqwalaselwa. Ngenxa yomgama omde ukusuka eLangeni, ayothusi into yokuba iplanethi yenye yezona zibanda kakhulu kunamaqondo obushushu angama - 220 degrees C kumoya ophezulu. Isiseko kucingelwa ukuba sikwi-5200 degrees C.
INeptune inesangqa esineeringi ezintathu eziphambili ezineeradiyo phakathi kwe-63,000 km kunye ne-42,000km ebonakala ngathi inesakhiwo esixineneyo apho benza iarcs endaweni yokugcwalisa amakhonkco. Kukholelwa ukuba amandla omxhuzulane avela kwiinyanga zikaNeptune anokubangela ukuqunjelwa.
indoda ye-taurus ithandana nomfazi wanamhlanje
Iinyanga - iTriton
U-Uranus une-13 eyaziwayo iinyanga yeyiphi iTriton (2700km ubukhulu) yeyona nto ibaluleke kakhulu. Inyanga elandelayo enkulu, iProteus, inobubanzi obungama-420km kuphela. I-Triton kuphela kwenyanga enkulu yokujikeleza ekubuyiseleni (umzekelo, kwicala elichaseneyo kuninzi lwee-orbits) kwaye kucingelwa ukuba yinto ebanjiweyo kunokuba yenziwe kwi-orbit. Inomoya ococekileyo weNitrogen, iCarbon Dioxide kunye nemethane. Nangona inobushushu bomhlaba obujikeleze i-230 degrees C, kucingelwa ukuba iyasebenza ngokuma komhlaba kunye ne-cryovolcanism (iqondo eliphantsi leentaba-mlilo) ezivelisa ukugqabhuka kwamanzi kunye ne-ammonia ebandayo ukuze yenze iintlambo ezinobunzima.
I-Neptune kunye noMntu
INeptune ayibonakali ngamehlo kwaye yayingaziwa ngabantu bamandulo. Kwaqala ukufunyanwa xa izazi ngeenkwenkwezi zibona ukungahambi kakuhle kwi-oranus ye-Uranus kwaye zacebisa ukuba iplanethi engekafunyanwa inokuba ngunobangela. Ngo-1846 uNeptune waqwalaselwa kufutshane nesikhundla esachazwa ngu-Urbain Le Verrier. Le yayiyiplanethi yokuqala ukufunyanwa ngengqikelelo yemathematics. U-Le Verrier ucebise igama elithi Neptune (uthixo wolwandle waseRoma) kwiplanethi kuba yayihambelana nokubiza iiplanethi emva kwezithixo zamaRoma (ngaphandle kwe-Uranus eyi-Greek).
Ukuza kuthi ga ngoku uNeptune (njengo-Uranus) utyelelwe kube kanye kuphela-kwakhona ngesiphekepheke seVoyager 2. Ukubhabha kwenzeka ngo-1989 kwaye kwabangela ukufunyanwa okuninzi kubandakanya iinkqubo zemozulu zeNeptune, amakhonkco kunye neenyanga ezi-6 ngaphezulu. Ikwabonelela ngomlinganiso ochanekileyo wobunzima bukaNeptune ovumela ukungangqinelani kwimizila yeUranus neNeptune ukuba isonjululwe.
Okwangoku akukho mishini icetyiweyo yokundwendwela iNeptune, kuba i-Neptune Orbiter kunye ne-Probe mission yehla yathandwa yi-Uranus Orbiter kunye ne-Probe mission.
Ukuhamba ngenqanawa eNeptune
Imifanekiso yokuhamba ngenqanawa yeNeptune
Ngaba ii-aries kunye ne-libras ziyavana
OKULANDELAYO: IPLANETHI 9? ISANDULELA: URANUS
Izinto ezisisiseko ... yintoni iplanethi?
Umhlaba (iplanethi efayo)
UPluto kunye noCharon
Intsingiselo yeVolet kunye nesimboli
Ukuhambelana kweAries kunye neeAries: Uthando, isondo, kunye nobuhlobo
Uphi loo mkhumbi-mkhuba ngoku?
Oprah Winfrey Iingcaphuno ezikhuthazayo nezikhuthazayo
Ukuhambelana kukaLeo kunye nePisces: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo
Ukuhambelana kwendoda kunye ne-libra kwabasetyhini
gemini indoda libra umfazi ebhedini
Leo mfazi unonomadudwane ebhedini
ipisces indoda taurus umfazi ebhedini
Ngaba ikhona i-retrograde ngoku